iOS9ကို scratch မှဘယ်လို install လုပ်မလဲ ငါက Mac ပါ
iOS9ကို scratch မှဘယ်လို install မလဲ
iOS9ပြီးသားအားဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည် Apple ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုစနစ်အသစ်ရှိသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုကောင်းစွာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အချိန်မရှိခြင်း။ ဒီနေ့ငါတို့ကိုပြမယ် iOS9ကို scratch ကဘယ်လို install လုပ်မလဲ သင့် iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod Touch တွင်မသန်စွမ်းမှုတစ်ခုအနေဖြင့် update ပြီးနောက် update အသစ်များစုဆောင်းနေသောအမှိုက်သရိုက်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ သင်ဤစာမူပြီးဆုံးသောအခါသင်သေတ္တာထဲမှထွက်သွားသည့်နေ့တွင်သင့်စက်ပစ္စည်းကိုရရှိလိမ့်မည်။
1 iOS9သန့်ရှင်း install လုပ်
1.1 iOS9ဖြင့် iPhone ကို Restore မပြုမီ
1.2 iOS9ဖြင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း
iOS9သန့်ရှင်း install လုပ်
ဒီနေ့ချုံပတ်ပတ်လည်ကိုငါတို့မရိုက်ဘူး။ သင်၏ပုံသဏ္inာန်၌သင်၏စက်ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်မှုစနစ်သန့်ရှင်းစွာတပ်ဆင်ခြင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုများစွာမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး၊ နေရာလွတ်ရရှိမည်ကိုသင်ကောင်းစွာသိပြီးဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီဒါကအားသာချက်ပဲ iOS9အနိုင်နိုင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအကြား 24 နာရီကြာပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားအယွင်းများပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်မှုတိုးတက်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူ၏အတွေ့အကြုံများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းအတွင်းရှိမည်သည့်အမှားအယွင်းများမှဤတိုးတက်မှုများပေါ်ပေါက်လာခြင်းကိုခွင့်မပြုကြောင်းအထူးအလေးထားသည်။
iOS9ဖြင့် iPhone ကို Restore မပြုမီ
ဒီနေ့အလွယ်ဆုံးနည်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိမ့်မယ် iOS9ဖြင့် iPhone ကို Restore လုပ်ပါ ဒီအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့သည်အချို့သောအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့တကယ်မလိုအပ်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ ဂိမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများစသဖြင့်အားလုံးကိုဖျက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၌ကျွန်ုပ်တို့၌နောက်ဆုံးပေါ် iOS version သို့ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါလိမ့်မည် iOS 9.
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် iPhone သို့မဟုတ် iPad မှကျွန်ုပ်တို့အရန်ကူးထည့်သည် iCloud ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်နှင့်ဆက်တင်များအားအကာအကွယ်ပေးရန်
ကျနော်တို့ function ကိုပိတ်ထား ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုရှာပါ.
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ wi-fi ကွန်ယက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါတယ်။
အခုလုပ်ကြည့်ရအောင် iOS9ဖြင့် iPhone ကို Restore လုပ်ပါ။
iOS9ဖြင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း
လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်သည်အောက်ပါအဆင့်များကိုလိုက်နာရုံသာမကစိတ်ရှည်မှုအနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင့်တွင်အစီအစဉ်များရှိလျှင်၎င်းကိုနောက်ပိုင်းတွင်ထားခဲ့ပါ။ အဲ့ဒီနေရာကိုသွားရအောင်:
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ PC သို့မဟုတ် Mac သို့ဆက်သွယ်ပြီး iTunes ကိုဖွင့်သည်။ ကျွန်ုပ် iPhone သို့သွားသည်၊ Restore ကိုနှိပ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုသမျှကိုလက်ခံပြီးစောင့်ဆိုင်းနေသည်။ အဲဒီအချိန်မှာ iTunes ကဘယ်လိုစတင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသင်တွေ့လိမ့်မည် iOS9နောက်ပြီးငါတို့ထဲကိုထည့်လိုက်တယ် iPhone ကို။ စိတ်ရှည်ပါ၊ ဤပထမလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးချိန်တွင်သင်သည်တီဗွီကြည့်နိုင်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးသွားသောအခါတွင်၊ ကျွန်ုပ် ၀ ယ်သည့်နေ့၌ကဲ့သို့၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone ကိုသုညသို့ပြန်လည်ထားရှိမည် iOS9ထည့်သွင်းထားသည် ယခု၎င်းကိုကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုသော့ဖွင့်လိုက်ပြီ၊ configuration ကိုစတင်ပါ။ ၎င်းကို iPhone တစ်ခုအဖြစ် configure လုပ်လိုပါသလားဟုမေးမြန်းသောအခါ၊ အသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အရန်ကူးခြင်းပြန်ယူခြင်း၊ ဒုတိယရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ခဲ့သောနောက်ဆုံးအရန်ကူးခြင်းကို ရွေးချယ်၍ လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းကို iPhone အသစ်တစ်မျိုးအနေဖြင့်လည်း configure လုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ထိုအရာပါပဲ။ iOS9၎င်းကိုသင်၏တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည် iPhone ကို၊ iPad၊ iPod Touch၊ အမှိုက်သရိုက်များအားလုံးကိုစနစ်ကိုယ်တိုင်နှင့်အပလီကေးရှင်းများမှဖယ်ထုတ်ပြီး၊ (သင်မယုံလျှင်၊ စစ်ဆေးပါ) နေရာလွတ်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏စက်သည်ယခင်ကကဲ့သို့တစ်ခါမှစီးဆင်းခဲ့သည်။ ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iOS ကို » iOS9ကို scratch မှဘယ်လို install မလဲ
ဒါပေမယ့် iTunes ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှားသွားတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲ။
D တံခါးများ ဟုသူကပြောသည်
အိုင်ယာလန်နိုင်ငံသို့ sms အနေဖြင့်ကုမ္ပဏီမှအမြဲတစေအားသွင်းပြီး iPad ကဲ့သို့ activate လုပ်သော sms ပေးပို့ခြင်းကိုမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်ကိုသင်သိပါသလား။
Ono - Vodafone ကကျွန်တော့်ကိုအားပေးရင်
Eddy eddinho ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းမွန်သောနေ့လည်ခင်းကျွန်ုပ်၏ iPhone ကို update လုပ်စဉ်အမှား ၅၀ ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လက်ကိုင်ဖုန်းမရှိသေးပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်အားကူညီနိုင်လျှင်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။
eddy eddinho သို့ပြန်သွားရန်
DFU Mode တွင် Home ခလုတ်နှင့် on / off ခလုတ်ကိုတစ်ချိန်တည်း နှိပ်၍ ဖိထားပါ။ ၎င်းကို iTunes နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးညွှန်ပြသည့်အဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
သူငယ်ချင်း၊ ငါလုပ်ပြီးပြီ၊ ဘာမှမလုပ်ဘူး၊ ပြproblemနာကငါအဲဒါကိုပြန်ယူချင်တဲ့အခါအမှား ၅၀ ရတယ်၊ ငါအချက်အလက်ရှာတော့ဘာမှမရှိဘူး
၎င်းကို iTunes ၏နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းသို့မွမ်းမံရန်သေချာစေရန်အခြားသို့မဟုတ် Mac မှပြုလုပ်ပါ။
Thailin Garcia Esparza ဟုသူကပြောသည်
Thailin García Esparza သို့ပြန်ပြောပါ
ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်သည်ထပ်တူအခြေအနေမျိုး၌ရှိနေသည်။ အမှား ၅၀ သည် Finware ကိုစစ်ဆေးပြီးမှသာကျွန်ုပ်တို့သည် iOs 50 ဗားရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုနေစဉ်တွင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏အလယ်တွင်ရှိနေသည်။ အိုင်ဖုန်း 9.1s ဖြစ်သည့်ပစ္စည်းသည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ တစ်ယောက်ယောက်သိလား
iCloud ချိန်ညှိချက်များကိုမွမ်းမံခြင်း ပုံမှန်လား၊
Gabriela V.F. ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ၎င်းကို iPhone အသစ်အနေဖြင့်စတင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အက်ပလီကေးရှင်းများကိုနောက်မှ download လုပ်ရန်ရွေးချယ်ပါကကျွန်ုပ်၏ဂိမ်းဒေတာနှင့်ပေးချေသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုငါဆုံးရှုံးမည်လား။
Gabriela VF သို့အကြောင်းပြန်ပါ
Hello Gabriela ကောင်းပြီအများကြီးဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ သင့် iPhone ကိုပြန်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပါက iTunes (သို့) iCloud တွင်သင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးအရန်ကူးထားလျှင်သင်၏အချက်အလက်နှင့်မှတ်တမ်းအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ၎င်းကို iPhone အသစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်၊ အရာနှစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ (၁) စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိဒေတာနှင့်မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းသောအက်ပလီကေးရှင်းများဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်၊ သို့သော် (၂) အသုံးပြုသူတွင်မှတ်တမ်းများသိမ်းထားသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများ အပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်သောအခါသင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်ဒေတာကိုထည့်သည့်အချိန်တွင်အကောင့်အသစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်ချိန်ဂိမ်းဒေတာကိုအတိုချုပ်ဖော်ပြပေမယ့်, ဒါပေမယ့်ဘယ်နေရာမှာသူကပေးဆောင် applications များအကြောင်းကိုပြောပါဘူး
Gabriel Marques ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါဟိုဆေး! အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်၏ iPhone အားသွင်းငွေသည် Mac နှင့်ဆက်သွယ်သော်လည်း iTunes တွင်မတွေ့ပါ။ နာရီတိုင်း ၃၀% ရုတ်တရက်ကျဆင်းသွားသည်အထိဘက်ထရီသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး သင်ဤပြproblemနာကိုသိသလား
Gabriel Marques ကိုပြန်ပြောပါ
Apple က Mac အတွက် iTunes version 12.3 ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အကယ်၍ သင်သည် Apple TV အသစ်ကို ၀ ယ်တော့မည်ဆိုပါကဤနေရာတွင် Siri Remote အတွက်ပထမဆုံးကာကွယ်မှုအဖုံးတစ်ခုဖြစ်သည်